musha » Dzazvino Nhau Zvinyorwa » Guestpost » Nzvimbo dzepamusoro dzeVadi veClass Architecture
Kunyangwe iwe uri nyanzvi yekuvaka iyo iri kuda kumwe kurudziro kana kuti iwe unongove nerudo rukuru uye chido chehunyanzvi hwakapinda mukusikwa kwezvivakwa zvemhando yepamusoro, saka pane akati wandei ekuenda kutenderera pasirese kwaunongove unawo. kuziva uye kuongorora. Kana wadaro, unenge uine chokwadi chekudyisa maziso ako pazvinhu zvausingazokanganwe nekukasira.
Kuti uwane mamwe epamusoro epasirese mazita evanoda zvechinyakare architecture, ita chokwadi chekuverenga.
Iyo UNESCO World Heritage saiti yeÚbeda, inowanikwa mudunhu reJaén kuSpain, inofanirwa kushanyirwa kune vanoda zvivakwa zvinogadzirwa mumhando yepamusoro yeRenaissance. Iyi nzira, yaimbove yakajairwa muSpain, ikozvino yapera, asi inozadza migwagwa kubva kune imwe mugumo weguta kuenda kune imwe, zvichireva kuti haungambove kure zvakanyanya nayo.
Kuita segedhi reAndalusia, gedhi rakazadzwa negungwa remiti yemiorivhi yakasiyana, kwete zvishoma, iyi ndiyo nzvimbo yakakwana yekushanyira kana iwe uchida kunyatsoona uye kuona nhoroondo isina kubatwa, isina kurohwa yeSpain. Musha wayo mapatya, Baeza, unowanikwa makiromita gumi chete kubva ipapo, hauna kunyanyoshata!
Zvichida hapana nzvimbo iri nani yokuti vadi vezvivakwa zvechinyakare vatungamire pasi pano kupfuura St. Petersburg. Pano, iwe uchazviwana wanyura zvakanyanya mubato reRococo, chimiro chakasvika mukurumbira muzana ramakore rechi18 muFrance asi munguva pfupi yakawana nzira yekuRussia. Zvauchawana kana ukadya maziso ako pazvivakwa zveSt. Petersburg zvakaitwa nefashoni yeRococo zvine makobvu akakombama akacheneruka. Kana iwe uri nyanzvi yezvivakwa, saka unenge uine chokwadi chekusiya guta iri nekurudziro yamwari maererano nebasa rako rinotevera rekugadzira.
MuNairobi, Kenya munogona kuwanikwa imwe yedzimba dzepasi rose dzasara dze'nyika yeChirungu'. The yakanaka Giraffe Manor imba rakavhurirwa chero ani zvake kuti auye kuzozviona. Chokwadi, rakavhurika chero munhu upi zvake kuti auye kuzogara mairi! Paunenge uchigara pano, hauzongoona zvivakwa zvinotaurira chiuru nyaya sezvazviri kudzoserwa kumashure kuma1930s nguva yekoloni, asi iwe uchaonawo akati wandei emhando dzemhuka dzesango dzichifamba nepamusoro pemba inoyevedza patsangadzi. Sezvaunenge watofungidzira kare, uchasangana nechikamu chako chakanaka chetwiza, asi pamwe netwiza, iwe unogonawo kuona akati wandei madiki, senge warthogs nemapikoko.
Kubva kuSpain kuenda kuRussia kuenda kuKenya, panogona kuwanikwa nzvimbo dzakananga uye zvivakwa izvo, kana zvichionekwa, zvichagara mundangariro yevadi vechokwadi vezvivakwa kwemakore anotevera. Munyika yose, mumakondinendi ose, kunogona kuwanikwa zvivakwa zvakamira muedzo wenguva uye zvino yava unyanzvi. Saka, chii chiri kukutadzisa kuenda kunze uko uye kuzviona zvese?